Ny Honor Watch dia haseho amin'ny 31 Oktobra | Androidsis
Mitombo hatrany ny tsenan'ny smartwatch. Maromaro ny marika manolotra ny maodelin'ity fizarana tsena ity. Ny manaraka hanolotra ny smartwatch vaovao dia Honor. Mpanamboatra sinoa dia efa nanambara ny daty hanolorana ny Honor Watch. Tsy hiandry ela intsony isika vao hihaona aminy.
Ity Honor Watch ity no famantaranandro vaovao navelan'ny vondrona telefaona sinoa antsika afaka herinandro vitsivitsy. Hatramin'ny andro vitsy lasa izay dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Huawei Watch GT avy amin'ny mpanamboatra sinoa tamin'ny hetsika tany London. Ka ny sonia fanoloran-tena matanjaka amin'ity sehatry ny tsena ity.
Ny 31 Oktobra no daty hanehoana an'ity Honor Watch ity. Tsy daty misy fotsiny io, satria haseho amin'ny hetsika iray ihany amin'ny fampisehoana ny Honor Magic 2. Ity fitaovana ity dia nantsoina ho flagship vaovao an'ny marika. Zava-dehibe io hetsika io.
Amin'ny endriny Huawei tena izy, ny marika dia hanolotra vokatra roa samy hafa ao aminy. Ny findainao finday vaovao sy ny finday vaovao. Famantaranandro iray izay Toa ny endriny manokana an'ny Huawei Watch GT io. Na dia misy famaritana samihafa aza.
Amin'izao fotoana izao Tsy manana angon-drakitra momba ny famaritana an'ity Honor Watch ity izahay. Angamba alohan'ny fampisehoana azy amin'ny faran'ity volana oktobra ity dia hisy fampahalalana bebe kokoa momba ny fiambenana. Na dia azo inoana aza fa ny marika dia miloka amin'ny famantaranandro tena mitovy amin'ilay iray natolotry Huawei tamin'ity herinandro ity tany London.
Hihaino tsara ireo angona mety ho tonga amin'ity Honor Watch ity izahay. Tsy misy fisalasalana, ny rafitra fiasa izay hampiasainao no ho fisalasalana lehibe, satria Huawei tsy nampiasa ny Wear OS ho toy ny rafitra miasa. Ka ny vintana dia tsy izany koa ny Honor.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny Honor Watch dia efa manana daty fampisehoana
Ho avy ny Nokia 8.1: ny masomboly lehibe navoakan'i Geekbench
Andriamatoa Juggler dia manolotra hevitra fa ho juggler ny baolina isan-karazany ianao